Ntughari njem njem ime site n'aka Dr. Mauro - Ahụike-Mgbatị Ahụ
Ntughari njem njem ime site n'aka Dr. Mauro
N'ịbụ onye dọkịta Erin (abụ m ọkachamara n'ihe gbasara ọbara na Portland, Oregon) ọ rịọrọ m ka m dee blọgụ ọbịa ntakịrị oge gara aga iji kesaa echiche m ma tinye ntakịrị n'ime ọgwụ nitty-gritty anyị rụgoro; Ekwetara m na ọ dị ntakịrị oge. Nke mbụ, ka m gwa gị na enwere m obi anụrị maka etu Erin si elekọta afọ ime nke ọma, Alexander na -amasị m nke ukwuu, na enwere m ahụ iru ala na mgbaghara Erin na -aga n'ihu n'ime ọnwa iri gara aga. Ọtụtụ n'ime unu nwere ike na -ajụ ka o siri mee, gịnị tụrụ anya na ọ ga -eme ma ọ bụrụ na ihe agaala nke ọma ruo ugbu a, gịnị kpatara ịmalitegharị ọgwụgwọ? Maka nlele anya, ka m were gị gafere nsogbu na mkpebi mụ na Erin kerịtara.
Buru ụzọ ka m gụgharịa akụkọ Erin na ahụike tupu ịtụrụ ime obere Alex. Ọ malitere dị ka onye ọrịa m obere oge nyochachara na Nọvemba 2001 na ihe a na -ahụta dị ka obere ihe egwu, CML; Ohere inweta ihe ịga nke ọma na gleevec dị mma yana nhọrọ ndị ọzọ dịka ntụgharị mkpụrụ ndụ stem sitere na nwanne nwanyị Erin Meghan ghọrọ onye amara. O ji obi ike kwenye isonye na nnwale ụlọ ọgwụ nke m mere nke jikọtara gleevec ọkọlọtọ na obere ọgwụ kemoterapi a na-akpọ cytarabine ma ọ bụ Ara-C, ọgwụ a maara na ọ bara uru ruo ọtụtụ iri afọ n'ọrịa leukemia. Ebumnuche ya bụ iji nyere aka bulie ohere nke ịbanye n'ime mgbaghara ngwa ngwa na nke miri emi na n'ezie ọ rụrụ ọrụ dịka emebere ya - ọ nwere ngwa ngwa karịa nzaghachi nkezi (ọbara na mgbaghara cytogenetic na -esote n'ime ọnwa). Ọ gara n'ihu na nchikota ahụ ọnwa ole na ole gara aga atụmatụ otu afọ ọmụmụ wee mezie ọgwụgwọ ya naanị gleevec ya, nke ọ jigidere - nke ọma, enwere m ike ịgbakwunye (ọ bụ onye ọrịa ihe atụ n'anya m) - maka afọ 3 sochirinụ. ruo mgbe ime.
A tụlere ime ime ọtụtụ nleta na oku ekwentị ma Erin maara na ọ na -agbaba n'ime mmiri nke enweghị eserese. Data anyị gwara anyị na gleevec bụ ihe mgbochi n'oge ime ime, nchekwa maka ụmụaka na utero ekpughere gleevec na -agbanwe agbanwe (ọnụ ọgụgụ buru ibu na -enweghị nsogbu, obere obere nsogbu yana ikpe ndị dịpụrụ adịpụ ukwu nsogbu), yana atụmanya izugbe maka onye nwere ọgwụgwọ nkwụsị CML bụ na nlọghachi azụ nwere ike bụrụ ihe a na -apụghị izere ezere. Akụkọ dị gbasara etu ụmụnwaanyị nwere CML ndị kwụsịrị ọgwụgwọ maka ịtụrụ ime si metụta ọtụtụ (ọ na -abụkarị naanị mgbaghara dị ka Erin) na -alaghachi azụ ruo n'ókè nke ịchọ ọgwụgwọ ruo na ngwụcha afọ ime.
Anyị rụchara ozi a niile ma Erin kpebiri ịga n'ihu. Ihe mesiri m obi ike bụ ikike Erin nwere ịnakwere akụkụ na nsonaazụ ya niile, nke kacha sie ike bụ na ọ na -ebute nwa n'ime ụwa na enweghị nkwa na -enweghị mgbochi nke 'ịnọ ebe ahụ' dịka nne, nne ma ọ bụ nna. Enwekwara 'Nick factor' (di nwere nghọta na nkwado) na ezinụlọ Zammett, otu n'ime ezinụlọ kacha nwee obi ike, na -akwado ma na -ekpo ọkụ m zutere, na -eme ka obi sie m ike ịgha n'ihu n'ihu n'agbanyeghị ejighị n'aka. Site na CML, leukemia Erin abụrụla nke a na -ahụghị ma ọ bụ nke a na -ahụtụbeghị (mgbe anyị hụrụ ihe ọ bụ ihe a na -akpọ 'nested PCR indeterminate') ruo ọtụtụ afọ, ọzọkwa, o nyeferela onwe ya ọgwụgwọ siri ike na nyocha, ihe niile dị n'akụkụ ya. N'ikpeazụ, mkparịta ụka gbasara ịmalite ezinụlọ dabara na ntị ndị nabatara dịka m mechara bụrụ nna ( lee Elizabeth, foto nwa m nwanyị, n'elu ) ma nwee ike ịghọta mmetụta Erin n'onwe ya.
Ime ime mere dịka atụ anya ya ma zubere ya. Erin buru ụzọ chọọ ọmarịcha ọmụmụ/dọkịta OB-GYN ka ọ nwee 1: ntakịrị nwa ọmụmụ ya na Nick iji hụ na ihe niile dị n'usoro, yana 2: ike ịmata n'oge mbụ, site na nyocha ọbara, mgbe ha tụrụ ime wee tụrụ ime. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa nke ihe mgbagwoju anya ebe ọ na -enye anyị ohere ime ihe m tụrụ aro ya, nke ga -anọ na gleevec ruo mgbe ọ mara nke ọma site na ụbọchị ịtụ anya nwa na akara ndị ọzọ echiche tụụrụ ime ma ọ bụ anyị nwere nnwale ọbara. na -akwado ya. Site na nke a, anyị jisiri ike pụọ naanị ụbọchị 8 ma ọ bụ karịa nke gleevec na sistemụ Erin mgbe a tụụrụ ime Alex, nke m tụrụ anya na ọ gaghị enwe nnukwu nsogbu nke nsogbu. Nke kapịrị ọnụ, ọ nọ na -enwe obi ụtọ mgbe mmepe nke ụbụrụ na akwara akwara (aka neural tube) zuru oke, oge m nwere nchegbu banyere ya (yana oge fọdụrụ n'oge mmalite, ọnwa mbụ). Maka ịdị mma, o nwere ule zuru oke n'isi mmalite afọ ime iji jide n'aka na Alex dị nkịtị ma na -etolite dị ka nke a.
Ihe merenụ bụ akụkọ ihe mere eme na blọgụ a, m na -atụkwa anya ịkọ nkọ banyere ohere nke ịnọ na mgbaghara zuru oke n'oge afọ ime yana karịa ka Erin mere. Ihe anyị maara gbasara gleevec na nkwụsịtụ ma ọ bụ ịkwụsị ọgwụgwọ bụ nke fọdụrụ n'ime mgbaghara kachasị mma (enweghị ike ịchọpụta ọrịa leukemia) yiri ihe na -agaghị eme eme ruo ugbu a nyere data pere mpe na ndị mmadụ nwere obi ike zuru oke ma ọ bụ nyere iwu ka ịkwụsị gleevec, na ọ bụ enwere ike ka ọmụmụ na mpaghara a ka na -amalite, e nwekwara olileanya na ọ ga -abụ ihe ga -ekwe omume dị ka ọgwụ gleevec dị ike karịa, nke a na-eji ugbu a mgbe gleevec adịghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ nke anabataghị, a nwalere ya na mbụ na CML, ma ọ bụ atụmatụ na-etinye usoro ahụ anyị ji alụso ọrịa ọgụ dị ka interferon na ọgwụ mgbochi ka etinyere n'ụzọ ziri ezi.
Ekwenyere m, nkwanye ugwu, enwere m olileanya na ọ ga -eduzi mkpebi Erin ga -aga laghachi na ọgwụgwọ ; ebe mụ na Erin nwere ike chọọ ịnwale ka ọ nọrọ ogologo oge, ma ọ bụ ruo mgbe ebighi ebi - nke a na -ejighị n'aka karịrị akarị. Ọ ga -akara m mma, dịkwa ka ọ ga -eme, mee ka ọ pụọ na tebụl ịkụ nzọ wee debe ibe ya. Cheta ihe nwere ike ime Erin chere ihu ọnwa 9+ gara aga na kechioma ọ gwara anyị na ọ na -enwe; ma cheta na enwere mkpọtụ (ikekwe mkpọtụ ma ọ bụ mkpọtụ, n'ezie) ịtụ vootu ikekwe site na obere Alex ma ọ bụ site na Erin n'aha Alex na -agwa ya ka ọ ghara ịgba chaa chaa mgbe ịmaliteghachi gleevec maka ya na -anọchite anya mmetụta dị ntakịrị, nhọrọ obere ohere nke kwesịrị idobe ya. na mgbaghara dị mma ọ ka nọ n'ime ya. Enweghị nkwa ọ bụla maka ihe ọ bụla; ọ bụ maka ịgagharị akụkụ na oghere dị n'okporo ụzọ nke ndụ. Ana m enwe nganga mgbe niile maka onye ọrịa m, onye na -ede blọgụ gị, na dike maka anyị niile, Erin Zammett Ruddy, maka ụzọ o si eme ya.
vita c ike dobe nyocha
ihe na-eme a dildo anya dị
agba ntutu maka ntutu ogologo ogologo
tatcha igirigi akpụkpọ ude nyocha
ebe nkuanya nku m nso